आज २०७७ माघ १६ गते शुक्रबार, स्वस्थानी कथाको दोस्रो दिन आफ्नो राशिफल पढ्नुहोस — Sanchar Kendra
१हस्ताक्षर समारोहलाई महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्दै
२नेकपा र सरकारबीच हस्ताक्षर समारोह शुरु
४नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु रिहा हुने क्रम सुरु, पहिलो चरणमा छुटे धर्मेन्द्र बाँस्तोला
५अमेरिकाको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुनलाई
६ओलीसँग एकै मञ्चमा देखिनुअघि नवलपुरमा यसरी झुल्किए विप्लव
७प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले आज संयुक्त सम्बोधन गर्दै
८इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा पुनः बढ्यो
९तीन सातापछि सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
१०काठमाडौँ आइपुग्दै विप्लव, बाँस्तोलालगायतका नेताहरु रिहा हुँदै, सुदर्शनलाई छाड्न पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
११कन्चनपुरमा प्रहरीले कसमाथि चालायो गो’ली ? १ जनाको मृत्यु
१२भोलि शुक्रबार पहिलो चरणमा छुट्दैछन् धर्मेन्द्र बाँस्तोला र बिरजंग
आज २०७७ माघ १६ गते शुक्रबार, स्वस्थानी कथाको दोस्रो दिन आफ्नो राशिफल पढ्नुहोस
आज २०७७ माघ १६ गते शुक्रबार । श्री स्वस्थानीकथाको दोस्रो दिन । यस्तो छ तपाईको आजको राशिफल +
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – वैचारिक मतभेद सिर्जना हुनसक्छ । साना–तिना समस्याले सताउँछ । पारिवारीक खटपट बढ्न सक्नेछ । बोलीविपरितको अर्थ लाग्न सक्छ । खर्च बढ्ने योग छ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । जोश,जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । शेयर बजारको कारोवार सफल नै हुनेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो) – आज मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । शरिर भारी र आलस्य होला । श्रमको उचित मुल्याङ्कन भएपनि सानातिना झैझमेलामा फस्नु पर्ला । प्रेम सम्बन्ध मध्यम रहनेछ । आज मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउने र जोश जाँगर बढ्नेछ । बन्धु–बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता पाईएला ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) – आत्मविश्वास बढ्नेछ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । आफन्तसंग भेट हुनेछ । आर्थिक पक्ष मजबुद बन्नेछ । स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुनेछ । आज प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । शुभ समाचार सुन्न पनि पाइएला ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । आर्थिक लाभ रहला । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । तर महत्वपूर्ण योजना गोप्य नराखे नजिकका व्यक्तिबाट वाधा आइपर्ला । मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । नयाँ कामको थालनी होला ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । आँटेको र ताकेको कार्य पूरा होला । न्यायीक क्षेत्रमा सफलता मिल्ला । प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ । निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ । स्वस्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढ्नेछ । चुनौतीको सामना गरी गलत निर्णय लिनपुगिएला सचेत रहनुहोला ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुनेछ । नजिकका व्यक्तिबाट कार्यमा वाधा आइपर्ला । लगानी गर्नु उपलब्धीमूलक नहोला ।अतिथीको सेवा होला । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । आयआर्जनका क्षेत्रमा सुधार आउनेछ । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – अग्रजको आशिर्वाद रहनेछ । नोकरी तथा व्यवसायको क्षेत्रमा पदोन्नतीको योग छ । आकस्मिक धन लाभ होला । शत्रु कमजोर हुनेछन् । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । आज न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत वढ्नेछ । नयाँ कार्य वा रोजगार पाइनेछ । मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – कला, साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । कार्य शिद्धिको योगछ । मनमा उत्साहका साथै बोली विक्ने समयछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । पार्टी तथा सेमिनारमा सहभागी भइएला । आदर्श ब्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे) – पूरानो स्वास्थ्य समस्या बल्झिन सक्छ। शैक्षिक क्षेत्रको काम सोचेअनुरूपले नबढ्नाले दिग्दारी महसुस हुन सक्छ । असीमित धन खर्चले चिन्ता बढाउनेछ । योजना अनुरूपको काम नहुन सक्छ ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि) – अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । गरेको कार्यमा सफलता पाईनेछ । पुनर्मिलनको योग रहेको छ । आज शरीर भारि र मन अस्थिर रहने संकेत देखिन्छ । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । घरायसी विवाद बढ्न सक्छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा) – शैक्षिक क्षेत्र अब्बल रहनेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ । साथीभाई र आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । सेयरबजार र भूमी सम्बन्धीको कारोबारबाट अधिक लाभ मिल्न सक्छ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । आज रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । बोलीको प्रभाब बढ्नेछ । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । पढाइ लेखाइमा प्रगति पनि हुनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) – वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । शुभ समाचार सुन्नमा आउला । आज अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । शेयर बजारबाट सफल मिल्नेछ । पुनर्मिलनको योग पनि छ ।
किन बसिन्छ श्रीस्वस्थानीको ब्रत ? यस्तो छ कारण !
सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी बालुवाको शिवलीङ्ग बनाई निराहार ब्रत बसेर तपस्य गरी मनोकाङ्क्षा पूर्ण भएको कुरा यस श्रीस्वस्थानी कथासँग जोडिएको छ । महादेवकी पत्नी सतीदेवीले आफ्ना बाबुले गरेको यज्ञकुण्डमा प्राण त्यागेपछि हिमालय र मेनकाकी छोरी पार्वतीकारूपमा उनको जन्म भयो ।
पार्वती सानै उमेरदेखि नै महादेव पति पाउने कामना गरिरहन्थिन् । विवाहयोग्य भएपछि पिता हिमालयले भगवान् विष्णुलाई कन्यादान गरिदिने कुरा थाहा पाएपछि पार्वती भागेर अनकण्टार वनमा पुगेरमहादेवको ध्यान गर्न लागिन् ।
स्वस्थानी शब्द ‘स्व’ र ‘स्थान’ गरी दुई शब्द मिलेर अन्त्यमा ‘ई’ प्रत्यय लागेर बनेको छ । यसको अर्थ स्वस्थानमा रहने देवी अथवा आफ्नै स्थानमा रहने भगवती भन्ने बुझिन्छ । अष्टदलका वरिपरि रहनेअष्टमातृका ९चामुण्डा, महाकाली, वैष्णवी, ब्राहृमी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही र इन्द्राणी० का बीच त्रिशूल, तरवार, कमल र चक्र लिएर रहेकी देवीको स्वरूप बताइएको छ ।
अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग, त्रिशूल, वर, नीलोत्पल हातमा लिएकी चार हात, तीन आँखा भएकी, विभिन्न गहनाले शोभायमान, सुनौलो वर्ण भएकी देवीकोस्वरूप छ । यस्ती देवी स्वस्थानीको विधिपूर्वक व्रत एवं पूजा(आराधना गर्नाले मनोकाङ्क्षा सिद्धि हुने विश्वासगरिन्छ ।
पौष शुक्ल पूणिर्मादेखि व्रत बस्ने भएकाले अघिल्लो दिनमा हातगोडाका नङ काटी आफ्नो शरीर सफा राखीसङ्कल्पपूर्वक व्रत आरम्भ गरिन्छ । एक महिनासम्म मध्याहृनको समयमा भगवान् शिवसहित स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा(आराधना गरिन्छ । व्रतालुहरूले पूजा(आराधनापछि स्वस्थानीको माहात्म्य वाचन वाश्रवण गर्ने गर्छन् । व्रत अवधिभरि चोखोनितो गरी मध्याहृनकालमा एक पटकमात्र भोजन गर्ने गर्छन् ।
विधिपूर्वकव्रत नबस्नेहरूले पनि आ(आफ्नो घरमा बिहान वा बेलुकी स्वस्थानीको कथा वाचन एवं श्रवण गर्दछन् । यसप्रकारकले श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक गरिएको स्वस्थानीको व्रत एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूणिर्माको दिनसमापन गरिन्छ । यस दिन सम्पूर्ण पूजासामग्री सहित स्वस्थानी परमेश्वरीलाई चढाउन विशेष वस्तुहरू १०८ कोसङ्ख्यामा हुने गर्छन् ।
स्वस्थानी व्रतकथाभित्र आउने लगभग सबै तीर्थस्थलहरू नेपाल विशेषगरी काठमाडौंभित्रै रहेका छन् । कथाकाविभिन्न प्रसङ्गमा आएका गुहृयेश्वरी, गोकर्ण, श्लेष्मान्तक वन, किराँतेश्वर, गौरीघाट, वाग्मती नदी, शालीनदीजस्ता क्षेत्र यहीं पर्ने हुनाले पनि नेपाली समाजमा यस व्रतले बढी महत्त्व पाएको प्रतीत हुन्छ ।
राजधानीदेखि १७ किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको प्राचीन नगर शंकरापुर ९साँखु० मा रहेका मणिशैल ९शाली० नदीकिनारमा महिला तथा पुरुषहरू श्रीस्वथानीको पूजाआराधना गर्दै व्रत बस्ने पनि परम्परा छ । स्वस्थानी व्रतकथामा लेखिएका लावण्यदेश अर्थात् साँखु शालीनदीमा एक महिनासम्म मेला लाग्दछ ।
यस ठाउँमासयौं व्रतालुहरू पुस माघको चिसोलाई समेत बेवास्ता गर्दै एक महिनासम्म बस्ने गर्दछन् भने अन्य दर्शनार्थीहरू पनिस्नानदर्शन आदि प्रयोजनका लागि पुग्ने गर्दछन् । सार्वजनिक बिदाको दिनमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ज्यादै भीडलाग्ने गर्दछ । यसैगरी पशुपति गुहृयेश्वरी, किराँतेश्वर, गौरीघाट, मृगस्थली आदि क्षेत्रमा महिनाभरि नै दर्शन एवंपूजन गर्नेहरूको भीड लाग्छ । गौरीघाटमा रहेकी भगवती पार्वतीको दर्शनको महिमा स्वस्थानी व्रतकथामा लेखिएकोछ ।
यसका साथै मुलुकभर रहेका पीठहरू ९सतीदेवीका अङ्ग पतन० भएका स्थानमा पनि भक्तजनको भीड लाग्दछ। यी पीठको महत्त्व बुझी एक पीठको मात्र दर्शन गरे पनि जन्म सफल हुने स्वस्थानी व्रतकथामा वर्णन गरिएको छ ।
स्वस्थानीको प्रत्येक अध्यायको कथा सकिएपछि इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये श्रीस्वस्थानीव्रतकथायां‘‘।भन्दै स्वस्थानीको आधारग्रन्थ स्कन्दपुराण भएको बताइएको छ । ३१ अध्यायमा विभक्त स्वस्थानीव्रतकथाका केही कथा स्कन्दपुराणबाट लिइएको भए पनि सबै होइनन् । पद्मपुराणमा शिवपार्वती संवादको रूपमा १५३ श्लोक मात्र स्वस्थानी व्रतमाहात्म्य बताइएको छ । स्वस्थानीको कथामा आउने प्रसङ्गहरू स्वस्थानी देवीको स्वरूप, व्रतविधिलगायत शिवशर्मा, गोमा, नवराज आदि प्रसङ्ग सामान्य रूपमा बताइएको छ ।
यसबाहेक श्रीमद्भागवत, विष्णु बाराहलगायतका पुराणलाई पनि स्वस्थानी कथाको आधार बनाइएको छ । यिनै विभिन्न पुराणलाई आधार बनाएर पहिले स्वस्थानी नेवारी भाषामा लेखिएको थियो । पहिले स्वस्थानी व्रतनेवार समुदायले मात्र लिने गर्दथे । पछि व्यापारिक सिलसिलामा नेवारहरू देशभरि फैलिएपछि स्वस्थानी व्रतले पनि फैलिने मौका पायो भन्नेहरू पनि छन् । करिब पाँचसय वर्षयता मात्र स्वस्थानी नेपालीमा लेखिन थालिएको शिवराजआचार्य कौण्डिन्न्यायनले लेख्नुभएको वैदिक धर्म मूल रूपमा भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ ।
“इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये श्रीस्वस्थानीव्रतकथायां…….।।
आज निकै नै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस दैनिक राशिफल
आज १२ बजेपछि चम्किदैछ यी ४ राशिको भाग्य, कतै तपाइको त परेन ?
यस्तो छ पौष महिनाको राशिफल, यी ४ राशिको चम्किनेछ भाग्य
आज २०७७ पुस १४ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको भाग्यफल